Izicupho Nokuphathwa Kwadlezinye
Traps and Predation Management
© Chris Daly
Izicupho zingasetshenziselwa ukubamba izidumbu, kepha izicupho kufanele zenziwe ngumchwepheshe futhi zisetshenziswe ngendlela engalimazi izilwane. Izimvume zidinga ukuthatha izinhlobo ezivikelwe noma ezisongelwayo.
Izicupho ze-Gin ziye zavinjelwa emazweni angaphezu kwezingamashumi ayisishiyagalolunye emhlabeni wonke, ngokusho kwama-Predators ku-Livestock Farms, I-Practical Farmers 'Manual ye-Non-Lethal, Holistic, Ecologicalally Acceptable and Ethical Management, eyakhiwa yiBool Smuts ngonyaka ka-2008. Lezi zingcupho zibangela iningi lokuhlupheka ngokugxila emlenzeni wesilwane. Izilwane azitholakali kuphela ekusebenzeni, kodwa zingase zife ngenxa yokoma noma indlala uma zingakhululwa ngokushesha nje lapho zithathwe. Kungase futhi babambe isifo sokugwedla uma ukulimala kwabo kuba septic.
Ngaphandle kwalokhu, izicupho ze-gin azikhetheli ngokuphelele, okusho ukuthi izilwane eziningi "ezingenacala" nazo zibanjwe kulezi zingcupho ezinonya.
Ngokusho kweCape Leopard Trust, izicupho ezithambile ziyahlukahluka ngezigqoko ze-gin kulezi zicupho ze-gin zinezinwele ezibukhali, ezinamanye ama-serrated metal, oklanyelwe ukudala umonakalo omkhulu wezilwane ezinothunjiwe, i-ligament kanye namathambo, kuyilapho izicupho ezithambile ziye zahlutha imifino ebanzi amapayipi e-rubberised, iziphethu ezibuthakathaka, ama-swivels aphindwe kabili nemithombo emgqeni ukuze kugweme ukulimala kwesiguli noma umsila.
Zibuye zingabhekwanga ngqo, kepha izilwane ngokuvamile zingakhululwa ngokuphepha kubo zingalimala. Lezi zingcingo kufanele zihlolwe nsuku zonke ukubeka izilwane ngokushesha ngemuva kokubanjwa futhi empeleni ukuvimbela ukulimala nokucindezeleka okungadingekile kulezi zilwane. Izingibe kufanele zihlelwe ngumuntu oqeqeshwe futhi angeke zifakwe ezinyathelweni zesilwane ezivamile, emigwaqweni eduze kwezingcingo zomgwaqo noma eduze kwezimbobo zokuchelela.
Ukugcina izicupho kukhona amadivaysi ahloselwe ukubamba futhi aqukethe isilwane, ngakho angasuswa. Izingibe zenzelwe ukuthi zingalimazi izilwane futhi zisebenze ne-trigger ebangela ukuthi umnyango wesango uvale kanye nesisindo kufakwa kuso.
Amakheji kufanele ahlolwe nsuku zonke, akhulule izilwane ezingenacala futhi anakekele izilwane ezibhekiswe kuzo. Ukungaboni emaceleni, kungaholela ezilwaneni ezibulawa yindlala noma ukoma. Izilwane nazo zingagxila noma zihlukumeze futhi zizilimaze emzamweni wokubalekela.
Izingibe zimbozwe ngamahlamvu, kuyilapho ugibe lugcwele umhlabathi ongenalutho. Zingase zisetshenziswe ngendwangu noma ukuhlamba ngokuya ngesilwane esilitshelwe futhi ngokuvamile zibekwe endleleni eyaziwayo yesidlwane. I-Leopards, isibonelo, ziyizilwane ezivamile, kuyilapho izidumbu zivame ukubuyela esilweni esisha. Ezinye izingibe zinomuntu ongashadile, kanti ezinye zineminyango emibili. Izingibe zisebenza nezinhlobo eziningi zezilwane, ngaphandle kwe-jackal.
Uhlobo lwezinyosi ezisetshenzisiwe luzohlukahluka kwesinye sezilwane kuya kwesinye. I-Manufacturing Management Manual ikhuthaza abalimi ukuthi bavale umnyango nge siponji noma i-raber ukuvimbela ama-cheetah noma izingwe ukuba bangalutholi imisila yabo. I-Leopards kufanele iphinde ihlanganiswe ngendwangu ebanzi ukuze ihlale ithulile futhi imiswe udokotela wezilwane ngaphambi kokuyisusa. Okufanayo kusebenza kuma-hyenasundu, ama-cheetah nama-otters.
Translated by Nsika Khoza
©2021 South Africa Online (Pty) Ltd. SouthAfrica.co.za. All Rights Reserved.